Zimbabwe: 'Another Coup Fear Over Mnangagwa's New Law' - Mutambara - allAfrica.com
Mugabe was accused by the coup leaders of neglecting his presidential duties by allowing his wife, Grace Mugabe, and senior members of the rival Zanu PF faction - G40 - to dictate the country's affairs. Mugabe died in September 2019.
Mutambara warned that Zanu PF could further shred the entire 2013 national Constitution if there are no checks and balances.
The Constitutional Amendment No. 2 Bill sailed through Senate Tuesday with most opposition MDC-T senators voting in Zanu PF's corner to help the ruling party achieve the required two-thirds majority.
However, political analysts, the MDC Alliance, and civic society organisations have described the development as "a sad milestone for democracy", while the ruling Zanu PF party hailed it as "a momentous occasion".
"The whole aim of adopting the Constitution was to trim the powers of the President, but the amendment in both Bills No. 1 and No. 2 has given back the draconian rule by Zanu PF, aided by MDC-T and its leader (Douglas) Mwonzora who was one of the builders of the decapitation of the Constitution," he added.
"Now that Zanu PF knows that they have sufficient stooges for consolidation of power, more amendments are on the way. Rumours that the ruling party seeks to raise the presidential age limit for one to qualify to be President may also come true, including other measures to eliminate electoral competition under the guise of the Constitution. Unfortunately, Zanu PF is being assisted by a party, MDC-T that purported to be representing democracy."